IOFISI YASEKHAYA EYAKHELWE KWIINGCACISO (ISIKHOKELO SOYILO LOKUGCINA) - I-OFISI ESEKHAYA
Eyona i-Ofisi Esekhaya IOfisi yasekhaya eyakhelwe kwiiNgcaciso (Isikhokelo soYilo lokuGcina)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela seofisi yasekhaya eyakhelwe kwimibono kubandakanya iikhabhathi, ishelfu, iishelufa zeencwadi kunye noyilo lwe-DIY.
Ukuba ufumanisa ukuba usebenza ekhaya, uyakufuna idesika enokuthi iphindaphinde ukusebenza kwalowo useofisini yakho. Nokuba kukwimisebenzi elula njengokuthatha amanqaku okanye ukuhlawula amatyala ukuze wenziwe amaphepha, kufuneka indawo yokusebenza eyenzelwe wena eya kuthi incede ukukhuthaza imveliso yakho, ngelixa ugcina zonke izinto zakho zilungelelanisiwe.
Iofisi yasekhaya yakhiwe ngaphakathisesona sisombululo sisiso ekuncedeni ukwandisa indawo yakho, ukwandisa ukugcinwa kwakho kunye nokukhuthaza ubuchule bakho ekhaya. Ezona zintle zakhiwe kwiinkqubo zokugcina zidibanisa iintlobo ezahlukeneyo zishelufa, iikhabhathi kunye needrowa kuba zibonelela ngendlela ehleliweyo yokugcina izinto zazo zonke iintlobo, iimilo kunye nobukhulu.
Eyakhelwe kwiofisi yasekhaya kulo mfanekiso ungentla ineekhabhathi ezinde ezifakwe iishelufa ezivulekileyo ezisebenza njengomboniso weencwadi nolunye uhlobiso. Icandelo elisezantsi lisebenzisa iidrawer ezigcina ukungqubana kungabonakali.
Iikhabhathi ezakhiweyo ngaphakathi eOfisini
Iikhabhathi ezakhiweyo kunye nobukhulu beeShelves zeencwadi
Iikhabhathi ezakhelwe edesikeni
Idesika eyakhelwe-ngaphakathi kwi-Ofisi yeKhaya ye-DIY
Uyakha njani iDesika eyakhiweyo
Eyakhelwe ngaphakathi kwiFenitshala yaseOfisini
IOfisi yaseKhaya eyakhelwe kwiiNgcamango zoYilo
I-Ofisi yeKhaya eyakhelwe-ngaphakathi i-Q & A
Yakhiwa malini kwiNdleko zeOfisi
Ngaba iiCalifornia zivaliwe?
Apha sikunika ezinye zezona zinto zakha zakha i-ofisi yeekhaya ezinokuzama ekhaya lakho. Nokuba unekona encinci okanye igumbi elipheleleyo leofisi yasekhaya, sineengcebiso ezifanelekileyo kunye nemibono yokukukhuthaza.
Akukho mntu ufuna ukusebenza kwiofisi yasekhaya emdaka kwaye eyona ndlela yokuthintela ukungqubana ekwakheni kwindawo yakho kukuba nokugcina okuthile kulungelelanisiwe.
Ukugcinwa okunje ngeekhabhathi kunye nokushelisha zizinto eziphambili ezakhiweyo kwiiofisi zekhaya. Ukuba ubeka indawo oza kusebenza kuyo ekhaya, uyakufuna indawo yokumisa, izixhobo zeofisi kunye nezixhobo zemisebenzi yakho. Ukuba nokugcinwa okuchongiweyo kuhlobo ngalunye lwento akuyi kunceda kuphela ukukhusela iofisi yakho yasekhaya ekujongeni kuxinene kodwa kuya kukunceda ngokufanelekileyo wenze umsebenzi wakho. Xa indawo yakho kunye nokugcinwa kweofisi ekhaya kulungelelanisiwe, ixesha kunye nomzamo ofunekayo wokujonga izinto unciphile kwaye ungagxila ngakumbi kwinto oyenzayo.
Xa kuziwa kuyilo olwakhiwe kwiikhabhathi zeofisi, olona hlobo luqhelekileyo ziikhabhathi zekhabhathi. Iikhabhathi zekhabhathi yeencwadi zihlala zindibanisela iishelufa kunye neekhabhathi ezivaliweyo. Ngokwesiqhelo, indawo ephezulu eyakhiweyo kwiyunithi yodonga igcwele ishelfu kwaye ezantsi zinikezelwe kwikhabhinethi.
Le taupe yakhelwe eofisini yasekhaya kunye neekhabhathi yilahlekisa ngendawo enkulu kuba iyahambelana ncam nombala weendonga. Ngaphandle kwendawo eyakhelweyo edesikeni egcina ikhompyuter, elinye inqanaba leshelufu lisebenza njengekhabhathi yeendaba kunye ne-tv.
Xa ucwangcisa uyilo kunye nolwakhiwo lweofisi yakho yasekhaya eyakhelwe ngaphakathi, elinye lamaqhinga aphambili okugcina engqondweni ngumbutho. Cinga malunga nokuba ufuna idesika ukuthatha yonke indawo, okanye ukuba ufuna ukushiya igumbi lenye ifanitshala kunye nokugcinwa. Xa kuziwa ekwakhiweni kwendawo eyakhiweyo, awusoloko ufuna ukugcina yonke into ifakwe kwidrowa. Thatha ithuba lokuma nkqo kwaye udibanise iintlobo ezahlukeneyo zeshelfu kunye neekhabhathi ezisuka kumgangatho ziye eluphahleni.
Ukwenza okusebenzayo kwakhiwe kwiikhabhathi zeofisi, kuya kufuneka ugcine engqondweni imilinganiselo esemgangathweni kunye nobukhulu kuyilo lwabo. Ukuba nobude obufanelekileyo, ubunzulu, ububanzi, ubude kunye nokushiya izithuba kuya kuqinisekisa ukuba eyakhiwe kwindawo yokugcina iofisi ikulungele ukuyisebenzisa.
Ubungakanani obuqhelekileyo kunye nesikhokelo sokulinganisa ekufuneka usigcinile engqondweni xa uyila okwakhiwe kwiikhabhathi zeofisi, ishelfu kunye neenkqubo zokugcina:
Eyakhelwe kwiikhabhathi zeofisi nakwiishelufa zeencwadi:
Imigangatho ukuphakama Zakhelwe kwiishelufa zeencwadi zee-ofisi zasekhaya -Ukuze kube lula ukufikelela, iishelufa zeencwadi ngokubanzi akufuneki zibe ngaphezulu kwe-intshi ye-84 okanye iisentimitha ezingama-213. Iishelufa ezincinci zeencwadi zihlala ziphakathi kwe-30 ukuya kwi-intshi ezingama-42 okanye i-76 ukuya kwi-107 yeesentimitha ukuphakama.
Imigangatho ubunzulu Iishelufa zeencwadi - Iishelufa zenjongo ngokubanzi zii-intshi ezili-10 ukuya kwezi-12 okanye iisentimitha ezingama-25 ukuya kwezingama-30 ubunzulu
Iyacetyiswa ishelufu yezithuba eyakhelwe kwiishelufa zeencwadi- Isithuba seShelf yeeshelufu zeencwadi ngokubanzi ziqala ukusuka kwii-intshi ezi-8 ukuya kwezili-12 okanye iisentimitha ezili-10 ukuya kwezingama-30.
Yakhelwe ukugcinwa kweofisi:
Iyacetyiswa ukuphakama yeshelfu ephezulu - Ngokusekwe kukufikelela okunethezekileyo komntu ophakathi ngokomlinganiso, ukuphakama okuphezulu kweshelfu kufuneka kube phakathi kwe-72 ukuya kwi-78 yee-intshi okanye i-182 ukuya kwi-198 yeesentimitha.
Iyacetyiswa ukuphakama yeshelfu esezantsi- Ishelfu esezantsi kufuneka ibe zii-intshi ezi-3 ukuya kwezi-4 okanye iisentimitha ezisi-7 ukuya kwezili-10 ukusuka kwinqanaba lomgangatho ogqityiweyo.
Iishelufa ezisemgangathweni ubunzulu -Kuxhomekeke kuhlobo lwento ekufuneka igcinwe, ubunzulu obucetyiswayo beshelfu eyakhiweyo kwiiofisi zasekhaya ukusuka kwii-intshi ezi-6 ukuya kwezingama-24 okanye iisentimitha ezili-15 ukuya kwezingama-61.
Iyacetyiswa ishelufu yezithuba Isithuba esishiyiweyo esishelufini ngokubanzi sisusela kwii-intshi ezi-7 ukuya kwezi-15 okanye iisentimitha ezili-17 ukuya kwezingama-43. Isithuba seeshelfu sinokuhluka ukusuka phezulu kuye ezantsi ukulinganisela okwakhiwe kwindawo yokugcina. Sebenzisa izithuba ezincinci phezulu kunye nezithuba ezinkulu kufutshane emazantsi ukunqanda ukwakhelwa kwakho ngaphakathi ekujongeni okuphezulu.
Le ofisi yasekhaya iqhakazileyo kwaye inomoya inikezelwe kumgangatho ophahleni owakhiwe eshelufini nakwiikhabhathi zepeyinti ye beige. Idesika ezimeleyo kunye nesihlalo seofisi sentsimbi embindini sihambelana nokucoceka nokutsha kokujonga okungaphakathi.
Nantsi i-engile eyahlukileyo yeofisi yasekhaya apha ngasentla apho unokubona yakhelwe ngaphakathi ngodonga olupheleleyo lweeshelfu, iidrowa kunye neekhabhathi. Uyilo olulula kunye nokuhonjiswa ngepaneli kwikhabhathi yinkcukacha ezigqibeleleyo zokutshatisa umxholo wangoku weklasi.
Udonga olungenanto phakathi kweshelfu yale nto yakhelwe kwiofisi yasekhaya isebenza njengomboniso wezityalo zangaphakathi ezithandekayo. Olu luyilo ludala ikhefu elibonakalayo elifunekayo kwisithuba esinesikimu sombala we-monochromatic.
Iofisi yasekhaya eyakhiwe kuyilo olungentla ithatha ithuba lokujonga okumangalisayo ngokugcwalisa iifestile ezinkulu ezinezihlalo ezibotshiweyo. Isandi esityebileyo somgangatho onamabala amnyama ukuya eluphahleni lwamaplanga eshelfu ayaneli nje ukunika ubushushu esithubeni kodwa ikwanika uvakalelo olunobunewunewu.
Ukuba wakhe ifenitshala yeofisi ehamba ukusuka eludongeni ukuya eludongeni, zama ukushiya ezinye iishelufa zingenanto njengoko kudala ukuqaqamba nokuqaqamba kwisithuba.
Umbala ongwevu wesitayile wale ofisi yasekhaya yakhiwe kwiikhabhathi yahluke kakhulu kwidesika emhlophe kule ndawo yanamhlanje. Endaweni yokusebenzisa into encinci eyakhelweyo kwidesktop, ikhawuntari iyandiswa, inika indawo ngakumbi imisebenzi eyahlukeneyo ebalulekileyo kunye nokuhombisa. Iofisi yasekhaya inesitayile esifana nendawo yekhitshi efanelekileyo kubathandi bokutya.
Endaweni yokubandakanya idesika ekwakhiweni kweshelfu, oku uyilo lweofisi encinci yasekhaya isebenzisa itafile ezimeleyo ukuzikhulisa iyunithi yedonga yokugcina incwadi.
Isipho seminyaka esi-1 somtshato
Guqula ilayibrari yakho iye kwisithuba sokufundela kunye nokusebenza ngokunikezela indawo encinci eyakhelwe edesikeni. Iofisi yasekhaya eyakhiwe kuyilo olungentla inetafile encinci yokusebenza ngokwaneleyo ukuba icwangcise ikhompyuter.
I-ofisi yasekhaya yesiko eyakhelwe-ngaphakathi izimvo zidibanisa i-vibe esesikweni kunye nentuthuzelo. Olu luyilo lubonisa umgangatho ophahleni olwakhiwe ezishelfini ezineekhabhathi zohlobo olugungqayo apha ngezantsi kwaye embindini yindawo yedesika yomthi eqinileyo ezimele isitulo seengalo ezimdaka ngombala.
Iofisi yasekhaya ayisoloko kufuneka ibe ligumbi elahlukileyo endlwini yakho. Ungajonga iindawo ezingasetyenziswanga, indawo echithiweyo okanye iikona ezingathandekiyo emva koko uziguqulele kwisikhululo somsebenzi ngokusebenzisa iofisi yasekhaya eyakhelwe edesikeni. Eli khaya, umzekelo, laguqula eli gumbi liphezulu laba yiofisi yasekhaya elula ngokwenza okwakhelwe kwidesika kwinook encinci.
Ngamanye amaxesha, yonke into oyifunayo ishelufu ekudaleni eyothusayo eyakhiwe kwiofisi yasekhaya. Olu luyilo luthile luneeshelfu ezinemibala ebalekayo ukusuka kuphahla lwasemgangathweni kunye nokwenza umahluko kwisithuba, izixhobo kunye neencwadi ezibonisiweyo yonke imibala ilungelelaniswe mhlophe.
Icebo lokwenza ukuba wakhelwe e-ofisini yasekhaya kukumenywa kukukhanya. Umzekelo, esi sithuba sincinci ecaleni kwefestile yindawo efanelekileyo yokwakha umtsalane owakhiwe kwiofisi yasekhaya njengoko ithatha ithuba lokukhanya kwendalo.
Umahluko sisixhobo esisebenzayo sokuyila njengoko iphakamisa umdla obonakalayo kwisithuba. Umzekelo, iofisi yasekhaya yala maxesha, idibanisa isitayile esimhlophe esimhlophe esimhlophe esakhiwe eshelini kunye nesihlalo esimnyama seofisi kunye nedesika. Kuyilo loyilo ngakumbi jonga igalari yethu ye Iingcamango zeofisi zeFeng Shui Apha.
Ukuba unobunewunewu bendawo, ungayisebenzisa ngokuyila eyakhelwe ukugcinwa kweofisi yasekhaya kwiindonga zegumbi. Uyilo olungentla apha lubonisa indawo enkulu yokugcina iincwadi zisebenzisa umgangatho wendalo onemibala ukuya eluphahleni lwesilingi. Izihlalo zefestile zomthi nazo zibandakanyiwe kuyilo ukuze zisebenze njengendawo yokufunda.
Yenza ubuchule ngendlela oyilungisa ngayo iofisi yakho yasekhaya ngezimvo ngokusebenzisa ifanitshala yezinto zakudala njengedesika yomsebenzi. Le ofisi yasekhaya ifudumeleyo ifaka iinkcukacha zangoku kunye nezemveli ngokudibanisa udonga olulula oluhlaziyiweyo eludongeni kunye ne-antique console ye-rustic ephindwe kabini njengendawo yokusebenza.
Ukuba unodonga lweekhabhathi kwenye indawo ekhayeni lakho, iya kuba yindawo efanelekileyo yokubeka eyakhelwe edesikeni. Ukubandakanya eyakhelwe edesikeni kunye neekhabhathi ayisiyonyusi kuphela indawo ekhayeni lakho kwaye yenza umsebenzi ophindwe kabini njengendawo yokugcina kunye nendawo yokusebenza, kodwa iyanceda ekufezekiseni ukucoceka nokujonga ngaphandle komthungo. Ukudibanisa eyakhelwe edesikeni kwikhabhathi ifihla idesktop, ngelixa ishelfu iphazamisa ewe kwaye yenza ukuseta iofisi yasekhaya yonke inyamalale kwisithuba
Kukho iindlela ezininzi onokuzama ukuzenza ezakhelwe edesikeni kunye neekhabhathi, kodwa enye yezona ndlela zisebenza kakuhle ukuyenza ingenamthungo kukugcina idesktop igcwele kunye nezinye iikhabhathi. Ukwandisa ububanzi be desktop ngaphaya kobuso beekhabhinethi kuya kuphula ukuqhubeka kwekhabhinethi. Ukongeza koku, i-desktop kufuneka ikwanokuphakama okufanayo neekhabhathi kumacala omabini.
Imhlophe emhlophe eyakhiwe kwiofisi yasekhaya inokuhlaziywa ngokulula kusetyenziswa umbala wodonga omtsha kunye nezinto zokuthelekisa. Iofisi yasekhaya enomtsalane iphuma nge-vibe ethambileyo, yobufazi ngokudibanisa umhlophe owakhiwe edesikeni ngokuhlaziya okukhanyayo kweapile kunye neendonga zepinki zeposi.
Izixhobo ozibeka eofisini yakho yasekhaya eyakhelwe ngaphakathi zidlala indima ebalulekileyo ekuphakamiseni umdla obonakalayo wendawo. Yonke indawo emhlophe, umzekelo, inokujongeka ngokufipheleyo kwaye iyothuke, kodwa kuyilo lweofisi yasekhaya eboniswe apha ngasentla, ukusetyenziswa kweefoto ezimnyama nezimhlophe ezifakwe kwisakhelo kunye nezixhobo eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji kuzisa ukukhanya okungacacanga kombala ophakamisa isithuba.
Ukuba unobunewunewu bendawo, unokukhetha ukusongelwa ngeenxa zonke ezakhiwe kwiidesika okanye kwiindawo zokusebenzela ezinemilo engu-U. Olu seto lusebenza ngokugqibeleleyo ukuba ufuna indawo yokusebenza yabantu abangaphezu koyedwa.
Olunye uyilo lokuzama iofisi yasekhaya izimvo ezakhelwe-ngaphakathi ziidesika ezinemilo eyi-L. Le nguqulelo inkulu ikwavumela abantu ababini ukuba basebenze ngaxeshanye kwisiphelo setafile nganye. Eyakhelwe kwikhabhathi phakathi ibekwe ngokugqibeleleyo kuba inokufikeleleka ngabasebenzisi bobabini kwiindawo zabo ngokulula.
Encinci eyakhelwe kwiidesika zeofisi yasekhaya ingena kwii-nooks ezincinci ngokugqibeleleyo kwaye ifuna indawo encinci. Ngombulelo kubungakanani becompact, zinokuguquguquka kakhulu kwaye zinokufakwa kwiindawo ezincinci ezinjengekona, phantsi kwezinyuko, okanye kweli tyala, ipaseji.
Nanku umzekelo weofisi encinci yasekhaya ye-DIY eyakhelwe ngaphakathi. Uninzi lwezinto ezincinci ezakhiwe kwiidesika zilula indawo yokusebenza ngokwaneleyo kwi-laptop, kodwa inokwenziwa isebenze ngakumbi ngokongeza ngaphezulu kwekhabhathi.
Ngaphandle kokhetho lokubonelela ngeofisi yakho yasekhaya ngedesika yokuzimela, enye yeendlela ezilungileyo zokwandisa indawo yakho ekhaya kukuyinyusa eludongeni. Umahluko phakathi kokusebenzisa idesika yokuzimela kunye nedesika eyakhelweyo kukuba le yokugqibela idibanisa ngokungagungqiyo kuyilo kunye nesitayile sendawo.
I-DIY eyakhelwe kwiidesika inokuza nekhabhathi kunye neshelfu, okanye inokuba yinto elula njengeqhekeza elinye ledesktop ejikelezayo eludongeni. Ukuba ufuna indawo yokusebenza eninzi. Unokwandisa i-diy yakho eyakhelwe edesikeni kubude bonke bodonga okanye wenze ubume obume ngo-L. Uyilo ekugqibeleni luya kuwe.
Eyona nto intle malunga ne-DIY eyakhelwe kwiidesika kukuba ungayenza ngokwezifiso nangayiphi na indlela oyithandayo nangokweemfuno zakho, iinkcukacha kunye nezinto ozikhethayo. Xa kuziwa kuyilo kunye nokuhonjiswa, i-DIY eyakhelwe edesikeni ivumela ukuguquguquka okuphezulu. Unokongeza ukugqitywa ekhaya ukuze wenze indawo yakho yokusebenza kwaye uyenze ibe lula ngakumbi.
Eyakhelwe kwishelufa ziluncedo olongezelelekileyo kwikhaya kuba zinokutshintsha ngokulula zibe yidesika encinci yeofisi yasekhaya. Le nto yakhelwe kuyilo lweofisi yasekhaya ilula kakhulu enee-tiers ezintathu zeedges, kodwa inika ukusebenza kwe-maximums kwaye inokusetyenziswa ngabantu ababini.
Ukwakha okwakhelwe edesikeni kunokwenziwa njengeNza ngokwakho kwiprojekthi yeempelaveki. Ukwenza isiseko esakhelwe edesikeni ngumsebenzi olula onokwenziwa nangabaqalayo abangenamava okuchwela. Logama nje unezixhobo zamandla ezifanelekileyo, unokwakha kwidesika eyenziweyo ngeentsuku ezi-2.
Imilinganiselo esemgangathweni kunye nesikhokelo sokulinganisa:
Imigangatho ukuphakama iidesika-zii-intshi ezingama-29 ukuya kuma-30 okanye iisentimitha ezingama-74 ukuya kuma-76 ukuphakama
Ngokuqhelekileyo ubude iidesika- ii-intshi ezingama-48 (iisentimitha eziyi-120), ii-intshi ezingama-60 (iisentimitha eziyi-150), ii-intshi ezingama-72 (iisentimitha ezili-180)
Ngokuqhelekileyo ububanzi iidesika - i-intshi ezingama-24 (iisentimitha ezingama-61), i-intshi ezingama-30 (iisentimitha ezingama-76), ii-intshi ezingama-36 (iisentimitha ezingama-91)
Uhlobo loyilo Xa usenza isigqibo ngemilinganiselo yedesika yakho eyakhelweyo, jikelezisa imilinganiselo yedesika yakho kweyona nyawo ikufutshane ukuya kwiimitha eziyi-0.15 ukwenza ukulinganisa, ukumakisha kunye nokusika kube lula kakhulu.
Nali inyathelo ngenyathelo lesikhokelo sendlela yokwenza into elula, esebenzayo ngokupheleleyo eyakhelwe edesikeni. Kule projekthi, ubungakanani besiphumo sedesktop zii-2 iinyawo x 4 iinyawo (24 intshi x 48 intshi)
Isiqwenga se-4 'x 8' x 1 board ibhodi yamaplanga eshinyeneyo (oku kuya kusetyenziselwa itafile ephezulu, yinqumle ibeyi-2 ft x 4ft ubungakanani okanye ngokobungakanani be desktop yakho oyifunayo)
Iziqwenga ezi-4 zamaplanga ayi-2 × 4 (oku kuyakusetyenziselwa imilenze kunye nokuthunga okanye ukuxhasa iziqhoboshi, kunqumle oku ngokobude obufunayo)
1.5 ″ izikhonkwane
Ilatex yokugcwalisa iinkuni
ukuqhelisela isidlo sangokuhlwa sokwenza i-toasts kamama
Ipeyinti yoqweqwe lwawo
Isandpaper i-180 grit
Isandpaper 320 grit
Izixhobo zokukhusela ezinjengeiglasi zokhuseleko, imaski yokuphefumla kunye neiglavu
Wabona amahashe kunye nokubanjwa kweenkuni (ngokuzithandela)
Ukuba ucwangcisa ukwenza iofisi yasekhaya eyakhiwe kwi-nook, peyinta udonga emva kwayo ngombala owahlukileyo. Ngale ndlela, awunayo kuphela i-aksenti endaweni, kodwa iyayichaza ukusuka kwelinye igumbi. Thatha le DIY encinci yakhiwe edesikeni njengomzekelo- ime endaweni kunye nodonga lwayo oluhlaza okwesibhakabhaka.
Amanyathelo okwakha edesikeni:
Icandelo 1. Ukuyila idesika yakho.
Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba indawo yakho eyakhelwe edesikeni izakuya phi, inyathelo lokuqala ekufuneka ulwenzile kukulinganisa indawo oza kuyibeka kuyo. Yolula itheyiphu umlinganiso ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye kwaye uqaphele imilinganiselo efanelekileyo. Phinda ujonge imilinganiselo onayo njengoko ibaluleke kakhulu kwaye ibalulekile ekuqokeleleni izinto oza kuzifuna ekwakheni idesika yakho.
Gqiba ngobungakanani obusebenzayo bedesika yakho. Ngokusekwe kwimilinganiselo esemgangathweni esele siyikhankanyile ngasentla, gqiba ngobungakanani bedeski yakho eyakhelweyo. Kule projekthi, siza kwenza i-2 ft nge-4 ft idesika.
Cwangcisa uyilo lwedesika yakho. Uyilo olulula olwakhiwe kwidesika yeofisi yasekhaya lunokuchaneka njengetafile esisiseko okanye idesktop ebekwe eludongeni. Unokwenza oku ngokwezifiso ngokweemfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo- ungafaka idrowa ukuba uyafuna okanye ikhabhathi evaliweyo ngaphantsi. Uyilo ekugqibeleni luya kuwe. Kodwa kwakhona kule projekthi, siza kwenza kuphela into elula eyakhelweyo kwidesktop enemilenze.
Uhlobo loyilo # 1: Ukuba awunasithuba saneleyo sokwakha kwidesika yeofisi yasekhaya, cinga ngokufaka idesika edadayo. Idesika edadayo ayizukufuna milenze kwaye kulula kakhulu ukuyenza kuba ufuna kuphela iziqwenga ezi-1 ukuya kwezi-2 zeebhodi zamaplanga eziza kusetyenziswa njenge-desktop, emva koko iya kudityaniswa eludongeni kusetyenziswa izibiyeli okanye izixhobo ezinyukayo. Iidesika ezidadayo zinokuba zincinci njenge-1.5 yeenyawo (0.46 m) x 3 iinyawo (0.91 m), kwaye zihlala zifuna kuphela iziqwenga zomthi ezi-1-2.
Uhlobo loyilo # 2: I-Plywood ihlala iza ngeenyawo ezi-4 x 8 yeebhodi ezinobungakanani obunobukhulu obuvela kwi-1/8 intshi okanye i-3.2 mm ukuya kwi-1 1/4 ye-intshi okanye i-31.75 mm.
Icandelo 2. Ukwenza i-desktop yakho usebenzisa iphepha le-4 × 8 leplywood.
Uhlobo loyilo: Ubunzima bokwenyani beebhodi ezi-2 × 4 ayizizo ii-intshi ezi-2 okanye iisentimitha eziyi-5.1, kodwa zii-intshi ezi-1.5 kuphela okanye iisentimitha ezi-3.8.
Ngokusekwe kubungakanani beebhodi, ubungakanani ngqo bedeski yakho ye-2 × 4 zii-intshi ezingama-24 okanye iisentimitha ezingama-61 ububanzi. Uya kuyidinga le nto ukuba ubhekise kuyo xa usika ii-brace kunye nemilenze yedesktop yakho.
Nje ukuba uthathe isigqibo kuyilo kunye nobungakanani bedesika yakho, sika iinkuni zakho ngokwemilinganiselo efanelekileyo. Kule desktop yale projekthi, linganisa i-2 yeenyawo ngo-4 iinyawo zoxande kwibhodi yakho yeplywood ye-intshi e-1. Makisha oku usebenzisa ipensile.
Sebenzisa i-miter saw okanye isetyhula saw, cola iplywood yakho ye-intshi e-1 ngokobungakanani.
Fumana i-plywood yakho yeenyawo ezimbini x 4 iinyawo kwaye usebenzise iphepha elisezantsi okanye eliphakamileyo le-sandpaper ngaphezulu kwemiphetho yeplywood kude kube lula ukuyilungiselela ukugqiba. Yenza oku kwiisetyhula kwaye uqiniseke ukuba umphezulu womthi ugudile ngokwaneleyo ukuze ukwazi ukufunxa ipeyinti okanye ibala ngcono. Iziphumo ezilungileyo, bambelela kwi-sandpaper engama-80 ukuya kwi-120. Unokusebenzisa i-sander yokugqibezela ngokuzenzekelayo njengoko uza kuwenza umsebenzi ngokukhawuleza.
Ukugqiba idesktop yakho. Usebenzisa ibrashi yepeyinti okanye ibrashi ye-roller, sebenzisa iidyasi ezi-2 ukuya kwezi-3 zepeyinti okanye ibala lomthi olithandayo kwidesktop yakho yeplywood. Bhrasha umbala ngokuchasene nomzekelo wengqolowa yeenkuni ukufezekisa iziphumo ezingcono.
Vumela ipeyinti yome okungenani iiyure ezingama-24 ngaphambi kokufaka idyasi elandelayo. Yeka ukufaka ipeyinti okanye ibala wakuba ufumene ubunzulu obunqwenelekayo bombala owufunayo. Vumela ingubo yokugqibela yepeyinti okanye ibala lome iiyure ezingama-24.
Uhlobo loyilo: Ngaphambi kokufaka enye ingubo yepeyinti okanye ibala, qiniseka ukuba iingubo zangaphambili zomile ngaphandle kwebala. Yongeza umaleko omnye ngexesha kwaye ucime nayiphi na i-pigment egqithisileyo.
Icandelo 3. Ukwenza imilenze usebenzisa iiplanga ezingama-2 × 4.
Yenza i-braces yenkxaso kunye nemigangatho yedesika. Linganisa ububanzi obufanayo be desktop yakho, thabatha ububanzi bemilenze emibini eya kwicala ngalinye kwicala lakho le-2 × 4 kwaye uliphawule usebenzisa ipensile. Kule projekthi, iqhekeza ngalinye lenkxaso liya kuba ziisentimitha ezingama-21 okanye iisentimitha ezingama-53 ubude ukuvumela igumbi lomlenze elaneleyo. (I-intshi ezingama-24 ububanzi be-desktop thabatha i-intshi ezi-1.5 ububanzi bemilenze kwicala ngalinye).
Ezi ziqwenga ziya kusetyenziselwa ukuqinisa idesika evela ngaphantsi. Yinqumle ngokobungakanani usebenzisa isarha. Uya kudinga iziqwenga ezi-2 ze-21 intshi ende ye-2 × 4 yeplanga.
2.Sika iidesika zakho ngokobungakanani. Linganisa ii-intshi ezingama-29 kwiziqwenga zakho ze-2 × 4, uze uthabathe iisentimitha eziyi-1.5 okanye iisentimitha ezi-3.8 (ukubonisa ubukhulu bedesktop) kwaye uyiphawule usebenzisa ipensile.
Uya kudinga amaqhekeza ama-4 e-27.5 intshi 2 × 4 yemithi yemilenze. Yinqumle ngokobungakanani usebenzisa isarha.
Uhlobo loyilo: Ubude bemilenze yakho yedesika bunokwahluka naphina ukusuka kwii-intshi ezingama-29 ukuya kuma-31, kuxhomekeke kubude obufunayo kwidesika. Lungisa imilinganiselo ngokufanelekileyo. Umzekelo, ukuba ufuna ukuba idesika yakho ibe ubuncinci i-intshi ezingama-30 emhlabeni, imilenze nganye kufuneka ibe zi-intshi ezingama-28.5 ubude.
3. Ukugqiba imilenze yedesika. Sebenzisa iphepha le-sandit eliphakathi ukuya kwizicucu ezisikiweyo ze-2 × 4 kunye neesanti de zibe zigqibelele ukugqitywa. Usebenzisa ibrashi yepeyinti okanye ibrashi yokuqengqeleka, faka idyasi yepeyinti okanye ibala lomthi kwimilenze yedesika. Vumela ipeyinti ukuba yome emva koko ufake idyasi elandelayo. Yenza oku de ufezekise umbala owuthandayo. Nje ukuba ugqibile ukufaka idyasi yokugqibela, qiniseka ukuba imilenze egqityiweyo yome ngokupheleleyo iiyure ezingama-24 ngaphambi kokuyidibanisa kwidesktop.
Uhlobo loyilo: Kukho ezinye iindlela onokukhetha kuzo kwimilenze yetafile onokuthi uyivavanye ukunika eyakhelwe edesikeni inkangeleko eyahlukileyo. Oku akuphelelanga kwi-2 × 4 elula yemilenze. Unokusebenzisa izinto ezahlukeneyo kuyilo olwahlukileyo.
Unokuthenga imilenze esele yenziwe kwangaphambili ekuphuculeni ikhaya kunye nakwiivenkile zehardware. Bazithengisa ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nezinto ezifana nesinyithi kunye neenkuni. Ayizukugcina ixesha kunye nomzamo kuphela, kodwa iya kukunceda wenze eyakhelwe kwidesika yeofisi yasekhaya evumelana nesimbo osifunayo.
Icandelo 4. Ukuncamathisela imilenze kwidesktop.
Qhoboshela imilenze yedesika yakho emazantsi kwi-desktop yakho. Sebenzisa i-drill yombane, beka iziqwenga ezi-2 zezikrufu zomthi kwicala elingaphandle lomlenze ngamnye kunye nasekupheleni kwenkxaso okanye izihlangu zezilima ezidityaniswe ngentsinjana / ngeplangana kwicala ngalinye ledesktop.
Ukuqinisekisa ukuba i-desktop yakho ibotshelelwe ngokukhuselekileyo emilenzeni, beka isiqwenga somthi rhoqo kwi-intshi ezi-7 okanye iisentimitha ezili-18 ngokwahlukana kobude benkxaso.
Vavanya idesika yakho ukuzinza. Jolisa idesika yakho ngobunono ukuze ubone ukuba izinzile na. Yenza uhlengahlengiso oluyimfuneko kwizikhonkwane xa kufuneka njalo.
Icandelo 5. Ukongeza i-Hardware kunye nokudibanisa amanqaku ongezelelweyo.
Ukongeza izixhobo ezifana neziphatho kunye neqhina lekhabhathi kukukhetha kwaye kuya kuxhomekeka kuyilo lwedesika yakho. Uninzi lwezincedisi luza nencwadana yazo yemiyalelo malunga nendlela yokuncamathisela.
Ngaphandle kwe-DIY eyakhiwe kwifenitshala yeofisi, ezinye iindlela onokuzihlola zenziwe kwaye zilungele ukwakhiwa kwifenitshala yeofisi. Isiko elenziwe ngefenitshala linokuyalelwa kubenzi bekhabhathi abanezakhono nakwimizi-mveliso yekhabhinethi, ngelixa izinto esele zenziwe zakhiwa kwifenitshala yeofisi zingathengwa kwiivenkile zefanitshala nakwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Xa u-odola isiko elenziwe ngefenitshala yeofisi ukusuka kumenzi wekhabhathi, umsebenzi uqala ngokuvavanya indawo, emva koko baya kuthatha imilinganiselo eyimfuneko abayifunayo ukulungiselela ulwakhiwo lwefenitshala yasekhaya. Ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile kunye neemfuno, umthengisi uya kudala uyilo kunye noyilo olwakhiwe kwiyunithi yodonga.
Nje ukuba uyilo lugqityiwe, imveliso iyaqala ngokusekwe kwimathiriyeli kwaye igqityiwe ukuba wena nomthengisi nivumelane ngayo. Imveliso iqhuba naphi na ukusuka kwiiveki ezimbini ukuya kwinyanga. Inyathelo lokugqibela kukufakwa kwesiko elenzelwe ifanitshala yasekhaya ekhayeni lakho.
Ukulungele ukwenza iofisi yasekhaya eyakhelwe ngaphakathi kwifenitshala kwelinye icala zinikezelwa kwi-rack. Ezinye iivenkile ezithandwayo njenge-IKEA, zihlala zibonelela ngeeyunithi zeedraw, iishelufa kunye needesika. Nangona ezi zinto zizimele, ungazinyusa eludongeni usebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kunye nenkxaso.
I-DIY eyakhiwe kwifenitshala yeofisi yasekhaya kunye nefenitshala esele yenziwe yasekhaya ngokubanzi ayibizi kakhulu kunokhetho olwenziwe ngokwesiko.
Esi sithuba sivulekileyo sinikwe indawo ende kakhulu eyakhelweyo kwidesktop enokuthi isebenze njengendawo yokusebenza okanye indawo yokufunda ezintathu. Ngaphantsi kwayo kwakhiwe kwiidrowa zokugcina.
Enye indlela esebenzayo yokugcina iofisi yakho yasekhaya inemibono eyakhelwe-ngaphakathi ekujongeni kukuxinana kukubonisa umxholo kunye nezinto ezilungelelanisiweyo ezishelfini, kwaye ugcine zonke izinto zeofisi zikhululekile kwiidrowa. Eyakhelwe kwiofisi yasekhaya apha ngasentla ijongeka ilungelelaniswe kusetyenziswa izinto ezincinci zomthi.
ikhitshi elimnyama lekhabhathi
Ukudala kwakhiwe kwiidesika nako kuluncedo ngakumbi xa usebenza nabekongamela abaninzi. Ayisiyiyo kuphela indawo eyaneleyo yezixhobo zekhompyuter yakho, kodwa unokuqhuba indawo kamnandi.
Nazi izinto ezothusayo ezakhelweyo kwiingcinga zeofisi yasekhaya onokuzama kuzo:
Isicwangciso somgangatho omkhulu sinika amathuba amaninzi e-ofisi yasekhaya eyakhelwe-ngaphakathi izimvo. Olu luyilo lubonelela ngodonga olupheleleyo kwisiko lalo elakhelweyo ngaphakathi kwiidrowa nakwiikhabhathi.
Uyilo lweofisi yasekhaya lwakhiwe eshelufini kwicala ngalinye nangaphezulu kweengcango ezintle zaseFrance.
Le shelufa yeencwadi zejometri yesiko inika ukujija kwendalo kwindawo yayo yethala leencwadi.
Iofisi yasekhaya ethambileyo inesitulo sefestile esakhelweyo. Ukuhlala ngefestile yindlela efanelekileyo yokuhlala edesikeni kwaye inokusetyenziselwa ukucamngca okanye ukuphumla. Enye into eyakhelweyo kwifenitshala yeofisi yasekhaya yindawo yedesika ezimeleyo, eboniswe ngasentla. I-ins ezakhiweyo zilungiswe ngokusisigxina eludongeni kwaye kwezinye iimeko, oku kunokuba sisona sisombululo sisiso kuseto lwakho, ngakumbi ukuba uyarenta kwindlu. Iidesika ezizimeleyo zikwalungele namagumbi aneenjongo ezininzi ekubeni ungazihambisa ngokulula ukuba ufuna ukutshintsha ubume bendawo.
Le eyakhelwe kwiofisi yasekhaya inendawo efanelekileyo- kufutshane neefestile ezinkulu apho ungonwabela ukukhanya okuninzi kwendalo. Iishelufa, ezinje ngentla, kufanelekile ecaleni kweefestile kuba zigcina ukuvuleka kunye nomoya wegumbi.
Isishwankathelo esimnyama esimnyama sale nto yakhelwe kwidesika yeofisi yasekhaya sisicatshulwa esigqibeleleyo sogqibo lomthi olukhanyayo. Inika indawo ngakumbi kubalinganiswa kunye nobukhulu nabo.
Iofisi yasekhaya ecwangciswe kakuhle eyakhelwe kwimibono eneeidesika, ezinje ngale iboniswe ngasentla, ayincedi kuphela ukugcina indawo yakho ijongeke kukuxinana, kodwa inokuphucula ukusebenza kakuhle kokuhamba komsebenzi. Ngolu hlobo lwedesika, unokuhamba ngokulula kwindawo yakho yokusebenza ngaphandle kokungena endleleni yakho.
Enye indawo ehlala ihoywa ekhaya yindawo ephantsi kwezitepsi. Ngelixa esona sisombululo sixhaphakileyo abanini khaya bezama ukuba oku kwakhiwe kwindawo yokugcina izinto, unokukhetha ukuyinika idesika eyakhelweyo kunye neeshelfu, njengaleyo iboniswe ngasentla.
Le ofisi yekhaya ethile yakhiwe nayo ikwandiswa indawo phantsi kwezinyuko usebenzisa idesika emile engu-L kunye nekhabhathi, iidrowa kunye neeshelfu ezingaphezulu. Ukutshatisa isitayile sayo kunye nemibala ehambelana nekhabhathi yekhitshi kuvelisa ukuqhubeka kuyilo kwaye kuyenze ibumbane ngakumbi.
Enye indawo efanelekileyo yokubeka eyakhelweyo kwiofisi yasekhaya likhitshi. Iidesika zasekhitshini zilungele ukwenza imisebenzi ekhawulezileyo enje ngokuthatha amanqaku okanye ukulungiselela amatyala, kodwa zinokusetyenziswa ukuba ufuna ukuxhoma ixesha elithile kwaye ufunde incwadi ngelixa unandipha ikomityi yekofu. Ndwendwela eli phepha ukubona okungakumbi Iikhitshi zasekhaya iofisi nook izimvo .
Ukwenza iofisi yakho yasekhaya eyakhelwe-ngaphakathi kwezimvo zibenomdla ngakumbi, zama ukwazisa iipateni ezingaqhelekanga kunye nokuhombisa kwakho, njengendawo yemveli yendawo yombhoxo kule Contemporary space classic.
Nika umoya wokumema kwiofisi yakho yasekhaya ngokusebenzisa ukugqitywa komthi kunye nendalo. Olu hlobo lokugqitywa kunye nezixhobo zibonisa ukufudumala kwaye kunokunceda ukuzisa i-vibe ekhuthazayo.
Icwecwe elakhelwe kwiidesika, ezinjengale iboniswe ngasentla, zilungile ukuba ufuna kuphela indawo yelaptop. Ukongeza ezinye ezakhiweyo kwiikhabhathi kunokukunceda ukuba uququzelele iiofisi zakho kwaye ngelixa ukhulula nokusebenza kwakho nakweyiphi na imfuhluza.
Iikhabhathi kunye nokugcinwa zizinto ezibaluleke kakhulu kwiofisi yasekhaya. Nangona ungathenga iinkqubo zokugcina esele zilungile kunye nokufaka iikhabhathi, ukuba nazo zakhiwe eludongeni kunceda ukuba wandise indawo yakho kwaye usebenzise amandla apheleleyo okugcina. Iofisi yasekhaya eyakhelwe ekugcineni inikezela ngendawo yokugcina izixhobo kunye nezinto ezinje ngeefayile, izinto ezenziwayo okanye iincwadi zeencwadana kwaye ikunika indawo echongiweyo ukubonisa iincwadi kunye nezinye izinto zokuhombisa.
Iiofisi ezakhelweyo zihlala zinedesika okanye indawo yokusebenza kunye nenkqubo yokugcina udonga enjengekhabhathi okanye ishelfu. Xa kuthelekiswa nefenitshala esele yenziwe, naluphi na uhlobo olwakhiwe ngaphakathi luthathwa ngokuba lubiza kakhulu kuba lusenziwa ngokwesiqhelo.
Isipho seminyaka engama-20 somtshato wakhe
Kuxhomekeka kwizinto ezininzi zeendleko, iofisi yasekhaya eyakhelwe-ngaphakathi izimvo inokuthatha naphi na $ 500 ukuya kwi- $ 10,000. Kodwa kwi-avareji, isiko elenziwe ngeofisi enedesika, iishelfu kunye neekhabhathi zibiza ngeenxa zonke $ 2500 iseti yonke, kubandakanya zombini izinto kunye nomsebenzi. Eyakhelwe iiyunithi zeofisi ezifakwe ziingcali, lindela ukuhlawula ixabiso eliqhelekileyo le- $ 1000 ukuya kwi- $ 4000.
Ixabiso lokwakhiwa kweofisi liya kuxhomekeka kwinani le iindleko ezifana (1) noyilo lwezinto ezakhiweyo ngaphakathi, (2) izinto ezisetyenzisiweyo, (3) izinto zokusebenza ezibandakanyiweyo (4) uhlobo lokugqiba kunye (5) nomsebenzi wokuchwela. Uyilo iphathelene nolwakhiwo kunye nenani leeshelfu kunye nohlobo lwenkqubo yokugcina oceba ukuyifaka kulwakhiwo lwakho eofisini. Lindela ukuhlawula ngaphezulu ukuba uyilo olunzima ngakumbi. Ngendlela efanayo, eyakhelweyo eofisini enokugcina okuninzi iya kuxabisa ngaphezulu kokulula okwakhiwe kwiofisi yasekhaya eneenombolo ezimbalwa ezishelifini. Ezinkulu ezakhiwe eziofisini ziya kufuna izixhobo ezingaphezulu kwaye kuya kuthatha ixesha elininzi ukwakha, yiyo loo nto zibangela ukuba indleko iyonke inyuke ngokufanelekileyo.
Inkqubo ye- izixhobo esetyenzisiweyo eyakhiweyo kwiofisi yasekhaya ikwadlala indima ebalulekileyo kwiindleko zeprojekthi iyonke. Ngapha koko, izixhobo ezisetyenzisiweyo zithatha isibini sesona siphezulu kuhlahlo-lwabiwo mali. Iinkuni zezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziswayo ekwakheni ii-ofisi zasekhaya, kodwa zikho nezinye iindlela zomthi oqinileyo ezifana neplywood kunye ne-MDF (medium fiber fiberboard). Kwiglasi yeeshelfu ezinamacala kunye nezibiyeli zentsimbi zinokusetyenziswa, kuxhomekeke kuyilo kunye nesitayile sokwakha kwiofisi yasekhaya.
I-Plywood, i-veneer, i-poplar kunye nepine zizinto ezingabizi kakhulu ezinokusetyenziselwa i-ofisi yasekhaya imibono eyakhelweyo. Ngelixa i-cherry, i-walnut kunye ne-oki zezinye zezinto ezibiza kakhulu ezikhoyo kwimarike. Ipayini emhlophe lolona hlobo lwexabiso eliphantsi lomthi olunokusetyenziselwa olu hlobo lweprojekthi kwaye lubiza i-1.95 yeenyawo ngenyawo lebhodi. Kwelinye icala, i-walnut lolona hlobo lubiza kakhulu lweenkuni kwaye ixabisa phantse amaxesha amane ngaphezulu kwepineyini, ejikeleze i-7.25 yeedola ngebhodi nganye.
Ngaphandle kwezixhobo, i uhlobo lokugqiba ikwathabatha indawo enkulu yendleko xa iyonke eyakhiwe kwiofisi yasekhaya. Ukugqitywa kunokuba yipeyinti, ibala lomthi, i-polyurethane, i-veneer okanye i-laminate, ukubala nje ezimbalwa. Oku akuxhomekeki kuphela kwinkangeleko ofuna ukuyifezekisa kwiofisi yakho yasekhaya, kodwa kunye nohlobo lwezixhobo ozisebenzisayo, umzekelo, umgangatho ophezulu wokhuni olomeleleyo olufana necherry kunye namandongomane akhangeleka kakuhle xa unyangwa ngengubo yamabala acacileyo omthi, ngelixa Ipoplar okanye ipayini iinkuni zinokunyangwa ngepeyinti yoqweqwe. Olona khetho lubiza kakhulu kukunyanga eyakhelwe iofisi yasekhaya ngeebhatyi ezimbini zokugqiba okucacileyo. Ukongeza idyasi ye-wax okanye ibala kuya kukuhlawula ngakumbi. Ukugqitywa okukhethekileyo kukwabiza kakhulu kunokugqitywa kwesiqhelo kuba kufuna ixesha elininzi kunye nomzamo wokufezekisa ukusebenza okubhaliweyo.
Izixhobo zibandakanya zonke izixhobo zekhompyutha ezisetyenzisiweyo ezinje ngezibambo zekhabinethi, iihenjisi, ukutsala kunye namaqhina. Iimpawu ezongezelelekileyo ezinje ngeendawo zombane, izixhobo kunye nezibane ezizodwa zikwanendleko zokongeza izinto ezakhiweyo kwiiofisi zasekhaya. Oku kuthatha elona candelo lincinci kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ixabiso lokugqibela elichaphazela kakhulu iindleko zokwakhiwa kweofisi yile sebenza. Abenzi beKhabhinethi kunye neengcibi bahlawulisa i-50 ukuya kwi-100 yeedola ngeyure. Bahlawulisa ngaphezulu komntu ophetheyo njengoko benobuchule kwaye baneminyaka yobuchwephesha ekwenzeni ikhabethe. Eli nqanaba lisenokwahluka ngokuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo. Kuxhomekeke kubungakanani beprojekthi, eyakhelweyo eofisini inokuthatha naphi na ukusuka kwiveki ukuya kwinyanga ukucwangcisa, ukuyila, ukwakha nokufaka.
Ukuba ucwangcisa ukufumana umyili ukuze akuncede uyilo olwakhiwe e-ofisini, lindela ukuhlawula i $ 200 ukuya kwi-500 yeedola ngaphezulu kuyilo lwemizobo esebenzayo kunye neenkcukacha ezichaziweyo ezakhelweyo. Imali iyonke yomyili iya kuxhomekeka malunga nendlela olucacisa ngayo uyilo noyilo olwakhiwe e-ofisini.
I-Closets yaseCalifornia yinkampani esekwe e-US egxile kwiziko kunye neekhabhathi ezenziwe ngokwesiko. Bazakhele igama njengenkokeli kwipremiyamu kunye nolawulo lwendawo yokunethezeka ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu yamava kolu shishino. Namhlanje, baneendawo zokubonisa ezingaphezu kwe-100 kwihlabathi liphela ezikulungeleyo ukunceda abathengi babo ngocwangciso lwendawo kunye neemfuno zekhabinethi ezenziwe ngokwesiko.
Lithini ixabiso eliphakathi laseCalifornia Closets? Inqaku elenziwa ngamaKhaya aNgcono kunye neGadi (i-BHG) lalikhe lathi iindleko eziqhelekileyo zenkqubo yokugcina esemgangathweni eyenziwa ziiClosets zaseCalifornia zijikeleze i- $ 1500 ukuya kwi- $ 5000. Kodwa njengalo naluphi na olunye uhlobo olwenziwe ngekhabhathi ngalo nawuphi na umthengisi, iindleko ziya kwahluka ngokuxhomekeke kuyilo kunye nobungakanani beprojekthi.
Kuba bonke abathengi baneemfuno ezahlukeneyo, iimfuno kunye nokubalulwa, indleko zeprojekthi enye enxulumene nenye eneneni ayinakuthelekiswa nanto. Ixabiso lilonke liya kutshintsha kuxhomekeka kwindawo okuyo, ubungakanani bendawo yakho, imveliso oyikhethayo, ukhetha ukuba yakhiwe kangakanani, ukugqiba kwakho kunye nezinto onqwenela ukuzibandakanya. Ukusuka kukhetho abalubonisayo, kunokubakho amakhulu endibaniselwano yoyilo, izixhobo kunye nokugqitywa onokuthi wenze.
Eyona nto iphambili yile, ngaba iiCalifornia zivaliwe? Ngokusekwe kuphononongo lwabathengi bangaphambili kunye nomgangatho wenkonzo kunye nemveliso abayibonelelayo, iiClosets zaseCalifornia zibiza kakhulu xa kuthelekiswa nabanye abathengisi. Kodwa ngaphandle koku, amaxabiso abo anengqiqo kwaye kufanelekile. Banikezela ngayo yonke inkonzo efunekayo ukuqala ngocwangciso lwendawo eyakhelweyo, njengokuhlola kunye nokulinganiswa kwendawo, emva koko bahlala nawe ukuze baxoxe ngeemfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo ngokweyilo. Imveliso, ukumiliselwa kunye nokufakwa kukwabandakanywa kwikhontrakthi yomsebenzi esemgangathweni.
Iintelekelelo zeendleko ezakhelwe eziofisini ngamanye amaxesha zinokuba nzima, kodwa kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba into oyigunyazisayo yinto eyenzelwe ngokweenkcukacha zakho, kusetyenziswa kuphela olona mgangatho ubalaseleyo wezixhobo. Nantoni na eyenziweyo isiko lolondolozo-mali, kwaye ekuhambeni kwexesha, kufanelekile kuyo yonke ipeni.
Ngakumbi iiofisi zasekhaya ezinxulumene nezakhelwe ngaphakathi jonga igalari yethu ye Iishelufa zeencwadi ezakhelweyo Apha.
I-Eon Concepts Storm Glass yemozulu ngaphambili… $ 31.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-432 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Ameriwood yasekhaya i-L-Desk Desk ene-B… $ 113.89$ 139.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-11895 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ufuna iDesika yeKhompyuter encinci 31-1 / 2 '' Yomelele… $ 59.90 umthengisi ogqibelele (580) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Sauder Dakota Pass Desk, ingcibi ye-Oak f… $ 191.99$ 224,99 umthengisi ogqibelele (162) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iisetyhi ezingama-59 x 59 yee-intshi ezinkulu i-L-Shaped Desk… $ 79.99$ 99.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-3454 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
monique lhuillier ilokhwe yomtshato abayili
Ilaphu likaChristopher Knight lasekhaya iHayes ... $ 173.75 umthengisi ogqibelele (451) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Winsome Halifax Ugcino / Umbutho,… $ 94.52$ 125.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-2746 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Bin Warehouse yoGcino lweeNkqubo ezili-12… $ 115.00$ 147,00 umthengisi ogqibelele (505) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
lithini ixabiso eliphakathi kwipleyiti nganye yokwamkela umtshato
izinto zokwenza kwitheko le-bachelor
izimemo zomtshato ziphuma nini
ayikuko ukuba andikuthandi
yeyiphi iminwe umsesane wakho womtshato oya phambili
ixilongo labafazi ubudala kuqhawulo mtshato